Home Page အား Update ပြုလုပ်သော်လည်း ရက်အတော်ကြာမှသာ သက်ရောက်ခြင်း — MYSTERY ZILLION
Home Page အား Update ပြုလုပ်သော်လည်း ရက်အတော်ကြာမှသာ သက်ရောက်ခြင်း
February 2012 edited February 2012 in Wordpress
အားလုံး မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ . . .
ကျွန်တော့် Blog မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခတ်အခဲတစ်ခုအကြောင်းကို ပြောပြအကူအညီတောင်းလိုပါတယ်။
ကျွန်တော်က Wordpress User တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အစတုန်းကတော့ Free Domain <a href="http://www.co.cc">CO.CC</a&gt; ကို အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ Hosting ကိုလည်း Free ရတဲ့ <a href="http://www.hourb.com">Hourb</a&gt; ကို အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့် Blog က လူကြည့်လည်းနည်းတော့ Free Hosting နဲ့ တော်တော်လေး အဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်။ ဘာပြဿနာမှ မရှိဘူးလို့ ဆိုလို့ရခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော် Domain တစ်ခုကို <a href="http://www.webhostmm.net">Web Host Myanmar</a> က ဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။ Hosting ကို <a href="http://www.hourb.com">Hourb</a&gt; ပဲ အသုံးပြုပါတယ်။ Wordpress နဲ့ Plug-in တွေကို Install လုပ်ခြင်း၊ Name server ၄ခုနဲ့ ချိတ်ခြင်း။ xml ကို ထည့်ခြင်း အစရှိတာတွေကိုလုပ် ပြီးတော့ www.winmyotun.com ကို ခေါ်ကြည့်တယ်။ Home Page တက်လာပါတယ်။ WP အသစ် Install လုပ်ထားတဲ့အတွက် Hello World ဆိုတဲ့ Post ပါနေပါတယ်။ အဲဒီ Post ကို WP ထဲဝင်ပြီး ဖျက်လိုက် ပေမယ့်www.winmyotun.com ဆိုတဲ့ Home Page မှာ အဲဒီ Hello World ဆိုတဲ့ Post ဟာ ပျက်မသွားပါ။ ပြဿနာက အဲဒီမှာ စတာပါပဲ။
ကျွန်တော် Browser ရဲ့ Cache ထဲမှာ Data တွေ ကျန်တယ်ထင်ပြီး Browser ရဲ့ Cache ကို ရှင်းလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီ Hello World ဆိုတဲ့ Post က ပျောက်မသွားပါ။ တကယ်တမ်းမှာ အဲဒီ Post က WP ရဲ့ Trash ထဲမှာတောင် မရှိတော့ပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့် Home page မှာတော့ အဲဒီ Post က ရှိမြဲရှိနေပါတယ်။ သို့သော် <a href="http://www.your-freedom.net/">Your-Freedom</a&gt; တို့လို ၊ Ultra self တို့လို ပြည်ပ IP အသုံးပြုတဲ့ Software များကို အသုံးပြုပြီး ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ Blog ဟာ အမှန်အတိုင်း ပေါ်ပါတယ်။ Up to date ဖြစ်ပါတယ်။ Hello World Post က မပေါ်တော့ပါ။
ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ဒီအတိုင်း ပစ်ထားလိုက်တာ ၄ ရက်ကြာမှ အဲဒီ Post ဟာ ပျောက်သွားပါတယ်။ ပြည်တွင်း IP ကနေဆိုရင် ကျွန်တော် Blog ကို တစ်ခုခု Modify လုပ်ပြီး ၄ ရက်ကြာမှ အဲဒီရဲ့ သက်ရောက်မှုကို User တစ်ယောက်က မြင်တွေ့ခွင့်ရမယ့်ပုံစံ ဖြစ်နေပါတယ်။
Main points . .
၁။ <a href="http://www.co.cc">CO.CC</a&gt; + <a href="www.hourb.com">Hourb</a> ဖြင့် အသုံးပြုခဲ့စဉ်က ၎င်းပြဿနာမျိုး မကြုံတွေ့ရခြင်း။
၂။ <a href="http://www.your-freedom.net/">YF</a&gt; ကဲ့သို့သော ပြည်ပ IP အသုံးပြုသော Software များ အသုံးပြုတဲ့အခါ ပြုပြင်မွန်းမံထားသည့်အတိုင်း update ကို မြင်တွေ့ရခြင်း။
၃။ ၄ - ၈ ရက်ခန့်ကြာမှ ပြင်ဆင်မွန်းမံမှုကို မြင်တွေရခြင်း။
၄။ Root server အထိအသုံးပြုပြီး ခေါ်ယူတဲ့အခါမှာ Up date ဖြစ်သော်လည်း နောက်တခါ Modify လုပ်၍ ခေါ်သောအခါ ဒုတိယအခြေနေအတိုင်းသာ ဖြစ်နေခြင်း။ (www.winmyotun.com.) Real time update မဖြစ်ခြင်း။
ကျွန်တော့်ရဲ့ ထင်မြင်ချက် . .
WP Installation နဲ့ Hosting ပိုင်းမှာ ပြဿနာမရှိနိုင်ဘူးထင်ပါတယ်။ <a href="http://www.your-freedom.net/">YF</a&gt; နဲ့ ကြည့်ရင် အခြေအနေအမှန်ကို ပြလို့ပါ။ သံသယရှိတဲ့ပုံစံကတော့ www.winmyotun.com ကို User က Request လုပ်တဲ့အခါ Routing Function အရ အနီးဆုံးမှာရှိတဲ့ webhostmm ရဲ့ Cache ထဲက Update မဖြစ်တဲ့ Page အဟောင်းကြီးကို ပြပေးနေတာ ဖြစ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။
၎င်းပြဿနာနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ Blog တွေကတော့
February 2012 Administrators
if you are using from Myanmar, you will face the problem like this. ISP may store the cache in around3days.
အဲဒါကြောင့်ကို ကျွန်တော်လည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်၊ ဘယ်လိုဘဲ update လုပ်လုပ် အဟောင်းကြီးဘဲပေါ်ပေါ်နေတယ် oversea ကနေကြည့်တဲ့လူကိုလှမ်းမေးတော့လည်း update ဖြစ်တယ်တဲ့ အဲဒီတုန်းကတော်တော်ကို စိတ်လေသွားတယ်ဗျာ အခုမှဘဲ ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာသိရတော့တယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုစေတန် နဲ့ ကိုဝင်းမျိုးထွန်း ရေ...